× Mmadụ Bịa ka anyị nwee!
ajụjụ Nri Anyasị
1 afọ 1 ọnwa gara aga #924 by mickod88
Ụmụnna na-edozi abalị
Bụrụ onye so na Rikoooo ugbu a maka ihe karịrị ọnwa 6, emesịa mezie iji gosi m dịka m na-adịghị agafe ugbu a ugbu a ka m nwee ike nweta oge P3D dị mma n'okpuru belt m ọzọ!
Aha m bụ Mick, m si Lossiemouth na Scotland, na-eje ozi ugbu a dị ka onye na-arụ ọrụ ụgbọ elu nke ụgbọ elu na RAF. Na-atụ anya ịmụtakwu ihe banyere P3D site na ndị kacha nwee ahụmahụ ma nwee olile anya ma tinyefee ihe ọmụma m na ndị ọzọ ọhụrụ n'ọdịnihu.
1 afọ 1 ọnwa gara aga - 1 afọ 1 ọnwa gara aga #925 by rikoooo
Nabata na nzukọ, ekele maka ịbata onwe gị.
Enwere m olileanya na ị ga-enwe mmasị na ụlọ ọrụ a, nzukọ dum dị ọhụrụ ma chọọ ụfọdụ ihe omume biko biko egbula ịde ebe a ma wetara ndị ọzọ ihe ọmụma gị bara uru.
Obi ụtọ na ụgbọ elu,
Nchịkọta ikpeazụ: 1 afọ 1 ọnwa gara aga site na rikoooo.
1 afọ 1 ọnwa gara aga #926 by Gh0stRider203
Aye, M nke abụọ na! Nabata, ma kelee gị maka ọrụ gị!